Raadi bixiyaha daryeelka caafimaadka ee kuugu dhow/Hitta rätt vård nära dig - somaliska - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Raadi bixiyaha daryeelka caafimaadka ee kuugu dhow
Stockholms läns landsting waxay ballaarisay daryeelka caafimaadka. Taasi waa sababta aad u heshay daryeelka saxada ah ee kugu dhow. Meel kasta oo aad ku nooshahay. Arrinta cusub ayaa ah in närakuterna ay ku saabsan tahay daryeelida dhaawacyada iyo cudurrada aad horay ugu baahneyd inaad u tagto isbitaalka degdega ah si laguu daryeelo. Laakiin waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu heli karo daryeel caafimaad. Halkaan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan daryeelka caafimaadka ee la helayo iyo meesha aad ka heli karto caawimaad.
Maalinta 1 Mey waxay qeybta dadka waaweyn ee xaaladaha degdegga ah ee Isbitaalka Jaamacadda ee Karolinska ee Solna noqoneysaa qeybta ugu weyn waddanka ee xaaladaha degdegga ee is daba joogga ah. Waxay qaabileysaa oo keliya bukaannada aadka u xanuunsanaya iyo kuwa dhaawacan ee lagu keeno helekobtar, ambalaas ama meel kale lagasoo gudbiyo. Kaligaa iskama aadi kartid halkaas. Wac 1177 si aad talo iyo hagitaan u heshid. Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar gelineysa wac mar walba 112.
Rugaha kale ee qaabilaadda ee lixda ah sidii caadiga ahayd ayey u furanyihiinhabeen iyo maalinba. Arrinku waa sidaas oo kale marka laga hadlayo seddaxda goobood ee xaaladaha degdegga ah ee gobalka,oo ay Solna ku jirto. Xagga dhaawacyada iyo cudurrada aan sugi karin waxaajira goobo dhadhaw oo xaalado degdega ah oo furanoo carruurta iyo dadka waaweyn loogu tala gala 8-22 maalin walba.
Akutsjukvården på 150 sekunder Soomaali
Goobo badan oo kala duwan
Marka adiga ama qof qoyskaaga ka mid ah uu xanuunsado, waxaa fiican in aad ogaato in ay jiraan daryeel caafimaad oo mar walba kuu dhow. Daryeelka aad u baahan tahay waxay ku xiran tahay inta uu la'eg yahay dhaawaca ama xanuunka.
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay daryeel iyo daaweyn dhaawacyo aad u culus iyo cudurro. Mararka qaar waxaad isku daaweyn kartaa gurigaaga adigoo raacaya talada kalkaaliso caafimaad. Waxaa jira meelo badan oo kala duwan oo aad ka heli karto daryeel. Dhammaan goobaha soo dhaweynta waxay leeyihiin shaqaale takhasus u leh.
Haddii aadan aqoonin daryeelka caafimaad ee aad u baahan tahay - wac lambarka telefoonka 1177. Waxaad heli kartaa caawimaad ka badan 24 saac maalintii.
Si aad u hesho talo caafimaad luuqad kale, wac 1177 oo riix badhanka 4:
Si ad u hesho talo-bixin caafimaad luqada Soomaaliga riix badhanka 2, waxaa lagugu xiri doonaa turjumaan. Adeegu wuxuu furan yahay maalin kasta laga bilaabo 08:00 ilaa 22:00.
Haddii ay jirto halis nolosha ah oo aad u baahan tahay daryeel deg-deg ah - wac 112. Waxaad heli kartaa caawimaad ka badan 24 saac maalintii.
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa sida daryeelka caafimaadku u shaqeeyo iyo caawimaad u raadso si aad u hesho adeegyada daryeelka caafimaad ee saxda ah.
1177 Vårdguiden waxay bixisaa talo caafimaad waxayna kaa caawineysaa inaad hesho adeega daryeelka caafimaadka ee saxda ah saacad kasta.
Waxaad wici kartaa lambarka taleefanka 1177 oo la hadli kartaa kalkaaliye caafimaad kaas oo kaala talin doona cudurrada iyo xaaladaha caafimaad. Mararka qaarkood kalkaalisada ayaa kuu sheegi karta inaad naftaada daryeeli karto. Kalkaalisadu waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad hesho daryeelka aad u baahan tahay. Bogga internetka 1177.se/stockholms-vard waxaad ka akhrisan kartaa warar dheeraad ah oo ku saabsan sida daryeelka caafimaadku u shaqeeyo iyo halka loo raadsanayo daryeelka caafimaadka ee luqada iswidhishka.
Adeegyada internetka (E-tjänster ) ee iswidhishka
Waxaad ka akhrisan kartaa kaydaka warbixinta isla, markaana ka dalban kartaa adeega iyo cawinta aad u baahan tahay 1177 Vårdguidens oo ah adeegga elektarooniga (e-tjänster) .
Adeegan elektarooniga ah ayaad ka samaysan kartaa balanka dhakhtarka, islamarkaana aad ka cusboonaysiisan kartaa receptiga dawada kaa dhamaatay.Tusaale ahaan, diiwaankaaga ayaa laga helaa macluumaad ku saabsan daryeelka iyo daaweynta aad heshay. Adeegyada elektarooniga ah ee laga helo 1177.se waxay ku qoran yihiin luqadda iswidhishka.
Ku gal e-legitimation ama lambar sireedka oo farriin gaaban u dir. Wixii gargaar ah, wac 0770-72 00 00 ama wax badan ka akhriso 1177.se/e-tjanster.
Vårdcentralen waa qaabilaadda kugu dhow markaad u baahato inaad la kulanto dhakhtar ama kalkaaliso. Degmada Stockholm waxaa ka jira 200 vårdcentraler oo takhasus u leh cudurrada caadiga ah.
Waxaad imaan kartaa haddii aad tusaale ahaan isku aragto:
Dhaawacyada xanuunka leh
Furan: Isniinta–Jimco 08.00–17.00.
Husläkarjouren waa vårdcentral oo furan habeenkii iyo maalmaha fasaxa todobaadka. Halkan wad imaan kartaa si aad u hesho daryeel caafimaad oo aadan sugi karin vårdcentral ilaa rugta daryeel-caafimaadeedka laga furayo. Waxaa jira 13 husläkarjourer oo aad tagi Husläkarjourerna waxay qaabilaan carruurta 6 bilood ka weyn.
Furan: Isniinta - Jimco 17.00-22. 00, Sabti - Axad 08.00-22.00
Wac Dhakhtarka si ad u hesho daryeel (Jourläkarbilar)
Jourläkarbilarna waxay bixisaa adeegyo habeenkii, habeenkii iyo dhammaadka toddobaadka ee loogu talagalay kuwa u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah, balse ay ku adagtahay inay tagaan soo dhoweynta. Wac 1177, ka dibna kalkaaliye caafimaad ayaa go'aaminaya in takhtarka deg-dega kuu iman doono.
Qaabilaadda carruurta iyo dhallinyarada waxaa loogu yeeraa BUMM. Waxaa jira dhakhaatiirta carruurta iyo kalkaaliyayaasha carruurta. Carruurta da'doodu tahay 0-1 sano waxay balanka dhakhtarka heli karaan isla maalinta ay balanta saystaan.
Degmada waxaa ku yaal 40 xarumood.
Furan: Isniinta - Jimco 08.00-17.00
Närakuten Närakuten waxaa loogu talagalay dhaawacyada iyo cudurrada aan sugi karin. Waad imaan kartaa ama ambalaaska ku imaan kartaa närakuten kuugu dhow. Waxaad ka heli kartaa caawimo badan oo ka mid ah dhaawacyada iyo cudurrada aad horey lagaaga daaweeyay ee adeegyada gurmadka ee isbitaalka.
Waad imaan kartaa hadii aad isku aragto, tusaale ahaa:
Dhaawacyada boogaha daran
Haddii aad u maleyneyso in gacan ama lug ka jabtay.
Haddii aad u maleyneyso in luga dareen jooge kaa heyso.
Dhammaan närakuter waxay leeyihiin:
Raajada iyo shaybaar.
Shaqaale si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay daryeelka carruurta, dadka waaweyn iyo dadka waayeelka ah.
Sanadka 2018, waxaa jiri doona 10 närakuter oo cusub oo ku yaal Gobolka Stockholm.
Närakuterna waxay qaabilaan caruurta da’adoodu ka bilaabanto 0 sanno.
Furan: Isniinta–Jimco 08.00–17.00
Qaabilaadda deg-dega ee Isbitaalada (akutmottagning)
Akutmottagningar waxaa loogu talagalay dadka qaangaarka ah ee leh cuduro aad u daran iyo dhaawacyo.
Akutmottagningen wuxuu furan yahay 24 saac maalintii.
Neefsashada kugu adagtahay
Akutmottagningen, kuwa ugu xanuunsan ayaa leh mudnaanta koowaad si loo caawiyo. Waxaa laga yaabaa in aad sugto haddii aanad si daran u xanuunsaneyn. Mararka qaarkood waxaad tagi kartaa isbitaal kale haddii aad halkaas ka heli karto daryeel fiican.
Akutmottagningar ee Stockholms län (Qaabilaada daryeelka deg-dega ah ee gobolka Stockholm)
Had iyo jeer wac 112 haddii ay jirto halis nolosha qofka.
Daryeelka deg-dega ah ee isbitaalka caruurta (Barnakut)
Barnakuterna ee isbitaalada waxaa loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada da'doodu u dhaxayso 0-17 sano oo leh cuduro halis ah waxayna u baahan yihiin daryeel toos ah.
Carruurtu way imaan karaan haddii ay qabaan:
Xanuunka caadada haweenka
Barnakuter ee Gobolka Stockhol
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset ee Södermalm
Astrid Lindgrens barnsjukhus ku yaala Solna
Astrid Lindgrens barnsjukhus ku yaala Huddinge
Wac 1177 ka hor inta aadan booqan barnakut.
Xarumo dheeraad ah – Akutmottagningar
Cudurrada xanuunnada maskaxda (psykiatri), qabatiinka (beroendevård), indhaha, dhallaanka iyo daryeelka ilkaha ayaa leh akutmottagningar kale. Waxay leeyihiin saacado kala duwan ee xiliga la furayo. Wac 1177 si aad u hesho cinwaanka iyo saacadaha furitaanka ee soo qaabilaadda saxda ah.
Cudurka maskaxda waa in aad maskaxda ka xanuunsato oo aad u baahato caawimo feker iyo dareen. Daryeelka qabatiinka daroogada wuxuu caawiyaa dadka dhibaatada khamriga iyo daroogada leh, tusaale ahaan. Daaweynta dhallaanka wuxuu ka caawiyaa cudurka caloosha haweenka.
Qaabilaadda bukaan socodka cudurada maskaxda (Psykiatrisk öppenvårdsmottagning)
Daryeelka cudurada maskaxda wuxuu dadka waaweyn siinayaa caawimaad maalin kasta laga bilaabo 08.00–22.00 siddeed xarumood.
Stockholms län waxaa jira 18 xarumaha cudurada maskaxda ah ee carruurta, BUP.
Furan: maalinta Isniin-Jimco.
Khidmadaha adeegyada daryeelka caafimaadka
Carruurta 0–17 sano: waa lacag la'aan, marka laga reebo barnakuten oo ah 120 kr
Dadka da'doodu u dhaxayso 18-84 sano:
Vårdcentral/husläkarjour/dhakhtarka heeganka (jourläkare): 200 kr
Närakuter: 200 kronor (SEK 200) (kharashka dheeraadka ah ee guriga booqasho leh jourläkarbil: 100 kr)
Akutmottagning Isbitaalka Akutmottagning: 400 kr
Qaabilaadda cudurada maskaxda (Psykiatrisk mottagning): 350 kr
Dadka ka weyn 85 sano: lacag la'aan